मसला स्वादमा मात्र नभएर यि रोग लागेमा घरेलु उपचार गर्ने जानकारी लिनुहोस उपचार बिधि सहित .. - Sudur Khabar
मसला स्वादमा मात्र नभएर यि रोग लागेमा घरेलु उपचार गर्ने जानकारी लिनुहोस उपचार बिधि सहित ..
Sudur staff February 13, 2018 जीवनोपयोगी 0
Total Reader : 5
मसलाबिना नेपाली परिकारको कल्पना गर्न सकिँदैन । हामीले खाने हरेक परिकारमा कुनै न कुनै मसला प्रयोग भएको हुन्छ । मसलाले परिकारको स्वाद र सुगन्ध बढाउनुका साथै शरीरलाई स्वस्थ पनि राख्छ ।
हिङको प्रयोग मुख्यत: सिजनिङमा गरिन्छ । यसले खानाको स्वाद बढाउँछ ।
कफ र पेट दुखेको अवस्थामा यसको प्रयोग औषधिकै रूपमा हुन्छ । दाँत दुखेका बखत गालाको बाहिरी भागमा हिङको लेप लगाउँदा पीडा कम हुन्छ । भर्खरै जन्मिएका बालबालिकाहरूको पेट दुखे नाभिको चारैतिर हिङको लेप लगाइदिँदा आराम हुन्छ ।
दालचिनीदालचिनीको प्रयोग सिजनिङका लागि गरिन्छ । गरम तथा अन्य मसला बनाउन पनि यसको प्रयोग गरिन्छ ।
दालचिनीमा हिलिङ र सुन्निने कम गर्ने गुण हुन्छ । घाउ, चोट आदिमा यसको लेप बढी प्रभावकारी हुन्छ । यसले सुन्निएको कम गर्न सहयोग गर्छ । यसको सेवनले ब्लड कोलेस्ट्रोल कम गर्छ ।
अलैंचीको प्रयोग मसला चियाका साथै मिठाईंमा फ्लेवर बढाउन गरिन्छ ।
अपचको समस्यालाई अलैंचीको प्रयोगले कम गर्छ । अलैंची खाँदा मुख गन्हाउने समस्याबाट मुक्त भइन्छ । मधुमेह हुनेहरूले यसको नियमित सेवन गरे फाइदा हुन्छ । यसको प्रयोग औषधि बनाउन पनि गरिन्छ ।
तेजपातको प्रयोग खानाको स्वाद बढाउन हुन्छ ।
तेजपातको तेलमा एन्टी फंगल तथा एन्टी ब्याक्टेरियल गुण हुन्छ जसले अनेकौं रोग हटाउन सहयोग गर्छ ।
खानालाई पिरो बनाउन खुर्सानी प्रयोग गरिन्छ ।
खुर्सानीमा रहेको एन्टी अक्सिडेन्ट्स कोलेस्ट्रोलसँग लड्न सहायक हुन्छ । यसले क्यालोरी घटाउँछ र मोटोपन कम गर्छ ।
ल्वाङ सिजनिङका साथै मसला बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ ।
ल्वाङ एन्टी बायोटिक, एन्टी सेप्टिक, एन्टी भाइरल, एन्टी फंगल, एन्टी प्यारासिटिक आदि हुन्छ । ल्वाङको तेल एकदम फाइदाजनक हुन्छ । शरीर दुख्दा, दाँत दुख्दा, सुन्निँदा ल्वाङ प्रयोग गर्न सकिन्छ । ल्वाङको तेल दम तथा ब्रोन्क्राइटिस आदिमा पनि उपयोगी छ । यो मांसपेशीको पीडा एवं बाथ रोगका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ ।
गार्नेसिङका लागि धनियाँ प्रयोग गरिन्छ । सुकेको धनियाँ मसलाका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ ।
घाँटीको पीडा, एलर्जी, ज्वरो, पाचन समस्या, बाथ एवं जोर्नीको पीडामा यसको प्रयोग फाइदाजनक हुन्छ ।
जिराखानाको स्वाद बढाउन जिरा प्रयोग गरिन्छ ।
जिरा आइरन एवं क्याल्सियमको राम्रो स्रोत हो । यसले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता सुदृढ बनाउँछ । जिरालाई पानीमा उमालेर पिउँदा पेट फुलेको, दुखेको वा अपचबाट मुक्ति पाइन्छ । जिरामा एन्टी क्यान्सर गुण पनि हुन्छ ।
मेथीमेथीको साग तरकारी बनाएर खाइन्छ । मेथीका दाना मसलाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । तरकारी, अचार आदिमा मेथी पड्काउँदा स्वादमा मिठास आउँछ । मेथीलाई भिजाएर, टुसा उमारेर तरकारीका रूपमा खान सकिन्छ । मेथीलाई भुटेर, मिक्स्चरमा पिसी नुन, खुर्सानी र कागती हाली अचारका रूपमा पनि खाइन्छ ।
नियमित मेथीको सेवनले ब्लड प्रेसर, सुगर तथा कोलेस्ट्रोल कम हुन्छ ।
तरकारी एवं दालमा लसुन प्रयोग गर्दा खानाको स्वाद वृद्धि हुन्छ ।
लसुनमा एन्टिबायोटिक गुण हुन्छ । रुघाखोकीमा यसको सेवन निकै फाइदाजनक छ । लसुनले कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्छ । हरेक दिन बिहान खाली पेटमा एक पोटी लसुन खाँदा स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ ।
खानामा स्वादका लागि अदुवा प्रयोग गरिन्छ ।
नियमित रूपमा अदुवा सेवन गर्नाले पाचनसम्बन्धी समस्या, ग्यास एवं अपचजस्ता समस्या समाधान हुन्छन् । अदुवा र मह मिसाएर खाँदा खोकीमा आराम मिल्छ । रुघाखोकीमा अदुवाको चिया निकै लाभदायक सिद्ध हुन्छ ।
खानामा स्वादका लागि मरिच प्रयोग गरिन्छ ।
मरिचले चिसो, रुघाखोकी एवं संक्रमणबाट जोगाउँछ । यसले पाचनसम्बन्धी समस्या तथा मांसपेशीको पीडामा फाइदा दिन्छ ।
बेसार धेरै प्रकारका स्वास्थ्य समस्यामा उपयोगी छ । खाना पकाउनुका साथै छालाको हेरचाहका लागि पनि यसको प्रयोग उत्तिकै हुन्छ ।
बेसार एउटा राम्रो एन्टिसेप्टिक हो । यसको लेप काटिएको, चिरिएको घाउ आदिमा एकदम फाइदाजनक हुन्छ । बेसार पाउडर तातो दूधमा हालेर पिउँदा घाँटीको समस्या, चिसो, पीडा तथा चोटपटकमा आराम मिल्छ । चिसोमा बेसार मिसाइएको दूध पिउँदा हाड बलिया हुन्छन् ।
केसरको प्रयोग खानाका साथै अनेकौं सौन्दर्य प्रसाधनमा गरिन्छ ।
केसरले छालासम्बन्धी समस्यामा ठूलो राहत प्रदान गर्छ । यसले ठण्डी एवं खोकीमा पनि आराम दिन्छ
यस्ता सजिलो व्याम बाट १ मिनटमे ढाड दुख्ने खुट्टा दुख्ने समस्या बाट छुटकरा मिल्छ ..
सुतेको कुन सपना देखे कस्तो फल मिल्छ ? कस्तो सपना सबैलाई भन्नु हुदैन ? जानकारिलिनुहोस ..
तपाईका यस्ता गल्तिले टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ : कारण सहित जानकारी लिनुहोस …